Iingcebiso malunga nokuThengisa kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Iingcebiso zokuthengisa kwi-Instagram
Disemba 21, 2018 0 IiCententarios 779
Ukuthengisa nge-Instagram: ukudala ulwazi ngohlobo kunye nabalandeli
Ngokudibana kunye nokubaluleka okwandayo kwezibonakaliso zentlalo kwi-algorithm ye Uphando, iyakhuthazeka ukuba isebenzise i iindawo zokunxibelelana kwezentlalo ukwandisa iinzame zakho zentengiso sizinika ezinye Iingcebiso zokuthengisa kwi-Instagram.
Enye yeendawo ebezifumana ingqalelo enkulu Iingcali ze-SEO ze Abathengisi be-Intanethi yi-Instagram. Kodwa njengayo nayiphi na enye isicwangciso seshishini, awunakungena nje emotweni kwaye ubone iziphumo.
Yazi indlela echanekileyo yokwenza Intengiso ye-Instagram, emva koko wakhe ulwazi ngophawu kunye nokufumana abalandeli abaninzi.
I-Instagram ithathe inyathelo lokuqala ukwenza iwebhu ibonakale ngakumbi, idala iifoto ezinomdla zabasebenzisi abaphakathi kunye neengcali kwiimpawu zeenkampani ezibone amandla alo liqonga.
El Ukwabelana ngeefoto Ibonakalise ukuba yeyona ndlela ifanelekileyo yokutsala abalandeli elungileyo, yonyusa ubudlelwane babathengi kwaye ikhuthaze inxaxheba ebonakalayo kunye nengxoxo yomsebenzisi. Ukonwabela zonke izibonelelo ezithembisayo, kuthatha ntoni ukwenza iphulo lakho lokuthengisa liphumelele?
1. Seta kwaye ulawule iakhawunti yakho ngokufanelekileyo.. Ukuba awukhupheli ngaphandle ulwazelelo kwimidiya yoluntu, kuya kufuneka uthathe ixesha lokuseta nokulawula iakhawunti… ngobuchule. Cinga ngendlela ongathanda ukuba abantu balikhumbule kwaye bajonge ishishini lakho.
Olungileyo Icebo lokuthengisa kwi-Instagram Ukuqwalaselwa yile yebritish yaseBritani yefashoni yohlobo lweBurberry. Phakathi kweefoto ababelana ngazo zithathwa ngexesha leziganeko zabo, ngasemva kwemiboniso. Ngokwenza njalo, benza abalandeli bonwabele "amava" ngokukhazimla kunye nobukhazikhazi ngaphakathi kweefoto. Oku kuthatha inxaxheba kubangela umdla kunye nokwabelana.
2. Seta iishedyuli. Akukho msebenzisi we-Intanethi uya kufuna ukulandela iakhawunti elayisha iifoto ze-30 kwakanye, yonke imihla. Nangona ukukhukulisa ukutya kwakho ngayo yonke into onayo kwikhamera yakho kunokuba kukuhendela ukuba ucinga gcina uphawu, le ntshukumo inokukhokelela kuphela kubalandeli abacaphukisayo abaya kuthi bathathe isigqibo sokuyeka ukulandela i-akhawunti yakho kwaye baphawule izithuba zakho njengogaxekile. Jonga nje kumgangatho kunye nokuyila, kwaye ifoto yakho kuphela enokuthi igqithise umyalezo wakho ngokufanelekileyo kunqaku elide ongabhala ngalo.
3. Ngenisa iifoto zokwenyani. Impumelelo yephulo lakho Instagram marketing Ilele ikakhulu kubuchule beefoto zakho. Ungaze ugcwalise ukutya kwakho ngeefoto zezicatshulwa ezixela iindaba, izehlo okanye inyusa Yabelana ngeefoto zokwenyani Uyilo kunye nokuyila, kwaye ukuba kufuneka ubandakanye isicatshulwa, yiyo loo nto isihloko saso.
Kwaye ukuba unengxaki ekuthabatheni isigqibo malunga nokuthumela into elandelayo, nantsi imibono emininzi yesicwangciso sobuchule:
Imifanekiso yeemveliso zakho iseti okanye imvelaphi eyahlukeneyo.
Imifanekiso yabantu, abadumileyo okanye abaqhelekileyo, abasebenzisa iimveliso zabo, inokuba yinto eqhelekileyo, ngokungathandabuzekiyo, ehlekisayo okanye engaqhelekanga.
4. hashtag. Ekusebenziseni iinethiwekhi zentlalo ntle, hashtags Banceda ikakhulu ukuhlelwa kopapasho. Banokusetyenziselwa ukudala uluntu ngaphakathi kweqonga ukuze babelane ngeefoto ezinomdla. Enye indlela yokwandisa ukusetyenziswa kwe-hashtags yi umbutho wokhuphiswano Ngamabhaso asengozini.
5. Yenza i-hashtag yakho eyahlukileyo. Ukwenza i-hashtag yakho yindlela elula yokwenza Abalandeli be-Instagram. Nje ukuba uzibhengeze igama le-hashtag yakho, qiniseka ukuba uyayikhuthaza kubaphulaphuli bakho ngokuyipapasha kuyo yonke nomphakathi kunye nesihloko kwisinye Instagram post.
I-Instagram ikwenza kube lula ukubeka iliso ekulandeleni ukuba ngabaphi abalandeli abasebenzisa i-hashtag yeshishini lakho. Ndikucebisa ukuthatha inxaxheba kubasebenzisi abapapasha i-hashtag yabo, nokuba ungababulela ngokobuqu okanye upapashe iifoto zabo kwaye uzimake. Ngokuqonda abasebenzisi basebenzisa i-hashtag yabo ngenkuthalo, abasebenzisi abatsha baya kukhuthazwa ukuba bapapashe.
6. Geo-tag iifoto zakho. Uluhlu lwendawo Iifoto ze-Instagram Iya kuvumela inkampani yakho ukuba ibandakanye uluntu lwakho kwinqanaba elahluke ngokupheleleyo. Ngokumaka iifoto ngokwezendawo, abalandeli bakho baya kuba nakho ukubona indawo (s) yeshishini lakho ukuba unayo: ivenkile yokuthengisa, ivenkile yokutyela okanye iofisi.
Ukumakishwa kwendawo yenye yeyona ndlela ilungileyo yokwakha ishishini lakho ngokulandela. Ukuba wena kunye neqabane lakho nisebenza kunye niyaphuma niyokutya isidlo sasemini, niyakwazi faka ifoto yakho kwindawo ahlala kuyo isidlo sangokuhlwa. Ngokwenza njalo, Abasebenzisi be Instagram abathe bakwindawo yokuhlala kule ndawo inye banokubona ifoto yakho, eya kuthi, ngethemba, ibakhuthaze ukuba balandele iakhawunti yenkampani yakho.
7. Khuthaza ukupapashwa kwabasebenzi. Abanye babaxhasi babo abathembekileyo kufuneka babe ngabasebenzi. Khuthaza abasebenzi bakho ukuba bathathe inxaxheba ngenkuthalo kupapasho lweefoto kwiakhawunti yeenkampani zakho izihlandlo ezininzi ngeveki. Ngokwenza ukuba abasebenzi bakho bakhwele, abasebenzisi abalandela iakhawunti yakho baya kulixabisa ithuba lokwazi ngakumbi ngabasebenzi benkampani yakho. Nanini na xa usungula izikhokelo ezicacileyo malunga nokuba kufanelekile ukupapasha ntoni, kuya kufuneka ulandele ngokukhawuleza ngenxa yeentlobo ezahlukeneyo zopapasho apho iakhawunti yakho izakuvela khona.
8. Qhagamshela iiakhawunti zakho zeendaba zentlalo. Qiniseka ukuba ungqamanisa konke iiakhawunti zemidiya yoluntu yenkampani yakho kunye ne-Instagram yakho rhoqo xa uposa ifoto.
Ngokwenza ukuba zonke iiakhawunti zakho zeendaba zentlalo zixhumeke, abaphulaphuli bakho banamandla aphezulu okwanda, kuba ayingabo bonke abalandeli bakho kunye nabalandeli abaza kulandela kwezinye iiakhawunti zakho, ezinje ngala: Facebook, Twitter, Tumblr kunye neFlickr. Ukuvumelanisa zonke iakhawunti zakho zeendaba zentlalo ayivumeli kuphela umxholo owongezelelweyo, kodwa kunye nethuba lezithuba ezithe rhoqo.
Unokuba nomdla kwindlela yokwenza oku khubaza i-Instagram.
1 Ukuthengisa nge-Instagram: ukudala ulwazi ngohlobo kunye nabalandeli
2 Iingcebiso zokuthengisa kwi-Instagram
Iindlela zeshishini lakho lokuthengisa kwi-Instagram
Snapchat vs. I-Instagram: Yintoni engcono kwaye ikhuselekile?